ONLYOFFICE 6.1 Inouya neSpreadsheet Enhancements, MacOS ARM Tsigiro uye Zvimwe | Linux Vakapindwa muropa
ONLYOFFICE 6.1 inouya nespredishiti zvinowedzera, rutsigiro rweMacOS ARM uye zvimwe
Ascensio Sisitimu SIA yakavhurwa munguva pfupi yapfuura kuvhurwa kweshanduro nyowani yehofisi yayo suite KUNYANYA KUNYANYA 6.1, vhezheni iyo inobvumira kunyanya kuvandudzwa kwebasa rekushandira mumaspredishiti uye zvinyorwa, zvirinani shanda nedhata remifananidzo uye mamwe mareferenzi marudzi, pamwe nerutsigiro rweApple's ARM architecture inowedzerwa.
ONLYOFFICE 6.1 zvakare tIvo vane akateedzana hunhu hunofambisa basa resainzi: Izvi zvinosanganisira zvakagadziridzwa dhayagiramu yekuongorora dhata, endnotes uye muchinjiko mareferenzi muzvinyorwa zvinyorwa, auto-kururamisa kwemasvomhu equations, uye dzimwe nzira dzekuongorora dzevapepeti vese.
1 ONLYOFFICE 6.1 Main Zvitsva Zvimiro
2 Tora ONLYOFFICE 6.1
ONLYOFFICE 6.1 Main Zvitsva Zvimiro
Pakati pekuchinja kwakanyanya mushanduro iyi nyowani, tinogona kuona kuti iyo pepa rekutarisa iro rinobatsira zvakanyanya basa rekushandira pama spreadsheet makuru. Nekubatsira kwako, vashandisi vanogona kugadzira firita inongoshandura yavo chete maonero e data, Pasina kukanganisa iyo yevamwe vanobatsirana.
Zvakare, kushanda nedhayagiramu dhata kwakagadziridzwa mushanduro nyowani. Dhata dzakateedzana uye zvikamu zvino zvinogona kugadziriswa nekugadziriswazve patsva pazvinodiwa. Vashandisi vanogona zvakare kushandura kuratidzwa kwedata nekuchinjisa mitsara nemakoramu.
Kushanda nemachati mumaspredishiti kwakagadziridzwa zvakare by ONLYOFFICE, dhata dzakateerana uye zvikamu zvinogona kugadziriswa nyore nyore uye nekugadziriswazve, pamwe nekushandura nzira iyo data inorongwa nekuchinjanisa mitsara nemakoramu.
Iyo gwaro gadziriso ikozvino inokutendera iwe kuti ushande nemhando nyowani dzereferenzi izvo zvinogona kubatsira pabasa redzidzo: zvinyorwa zvekupedzisira uye zvinongedzo zvemuchinjikwa.
Endnotes, ayo mareferenzi akaiswa panoperera chikamu kana panoperera gwaro pacharo, anogona kugadzirwa nekugadziriswa, uye zvakare anova omuzasi uye zvinopesana; Vanogona zvakare kuchinjaniswa kana kubviswa nekukosha kamwe chete.
Muchinjiko-mareferenzi anotendera vashandisi kugadzira zvinongedzo kune zvimwe zvikamu zvegwaro ravari kushanda pairi: mairafu, matafura, mabhukumaki, zvichingodaro. Ivo vanoratidzika sezvisungo zvinotora muverengi kuchinhu chakataurwa.
Nekungodzvanya pane chirevo, vaverengi vanogona kuwana nekusvetukira patafura, mufananidzo, graphic kana chero chimwe chinhu. Kutanga neiyi vhezheni, iyo ONLYOFFICE izwi processor inongoerekana yaverenga mitsara mugwaro uye inoratidza iyo nhamba padhuze nemutsara wega wega wezvinyorwa.
Chimwe chinhu chitsva chinomira kunze ndeye itsva auto-kururamisa sarudzo. Mune vhezheni 6.1 iwe unokwanisa kuwana sarudzo dzekugadzirisa itsva: masvomhu kugadziriswa kwekuenzanisa uye tsananguro yemataurirwo anozivikanwa semabasa.
Paunenge uchishanda nemagwaro uye maspredishiti, iwe unogona zvakare kuvhura otomatiki kururamisa, semuenzaniso kuti zvigadzire zvigadzire zvine mabara kana nhamba dzakanyorwa.
Pakupedzisira, imwe itsva iyo inoperekedza iyi vhezheni vhezheni, ndeyekuti iwo desktop desktop kubva kumupepeti wemagwaro, maspredishiti uye mharidzo sinowirirana neApple's ARM mapurani, zvinoreva kuti dzinogona zvakare kushandiswa pane macOS masystem nemaARM processor.
Finalmente kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo nezve iyi nyowani vhezheni yakaburitswa, unogona kutarisa iyo ruzivo Mune inotevera chinongedzo.
Tora ONLYOFFICE 6.1
Kana zviri zvekuisa mapakeji, aya akagadzirira uye anowanikwa pane webhusaiti yavo yeWindows, macOS neLinux (madhiri uye rpm mapakeji, mapakeji muSnap, Flatpak uye AppImage mafomati anozoitwawo munguva pfupi).
Iyo yemahara nharaunda vhezheni inoparadzirwa pasi peAGPLv3 rezinesi. Iko zvakare kune yakabhadharwa Enterprise vhezheni nehunyanzvi mashandiro (zvemukati zvidzoreso, gwaro kuenzanisa), mukana kune technical technical, uye kuronga kugona. Vagadziri vanogona kuisa ONLYOFFICE Docs mune avo webhu kunyorera vachishandisa Yekuvandudza Edition.
Iyo Nharaunda kana Enterprise shanduro dzinogona kushandiswa mukati me ONLYOFFICE Workspace, yakavhurika sosi yekugadzira mhinduro yekugadzirisa zvinyorwa, mapurojekiti, vatengi, maemail uye mashedhi mukati mekambani yemukati network.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » ONLYOFFICE 6.1 inouya nespredishiti zvinowedzera, rutsigiro rweMacOS ARM uye zvimwe
Mune yangu Linux Mint kuisirwa ini ndinoshandisa chete Hofisi seye default office suite. Iyo haina simba rese iro hofisi yemahara inogona kuva nayo, asi kune mushandisi akajairika inopfuura zvakakwana, ine kuwirirana kukuru neMS Office, uye nekushamisa inopa chiuru kutendeukira kuLibre Office (kunyangwe mune yekupedzisira ndinofungidzira izvozvo nekuda kwekunakirwa, mavara)
Kubernetes inoenda kushanduro 1.20, zvichiratidza kusvika kweKubectl Debug mu beta.
Google Poly, iyo 3D chinhu chikuva ichavhara muna Chikumi 2021